यो समयमा नेपालको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सरकारको नेतृत्व अनि नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको एकीकरणको चर्चा शिखरमा पुगिरहेको छ । टेलिभिजनहरूमा प्राथमिकता दिएर यिनै सवालमा छलफल चलाइएको पाइन्छ । अखबारहरूको ब्यानर न्युज यिनै बन्दै आएका छन् । अनलाइन पत्रिकाका हटेस्ट न्युुज यिनै बनिरहेका छन् । चिया पसलमा फुर्सदिला राजनेता घण्टौंसम्म यिनै विषयमा छलफल गरेर बस्छन् ।
छलफलका क्रममा सुनेका आदि नाममा अनेकौं कोणबाट कुराहरु आउँदछन् । एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष बनाइने हो भने मात्र पार्टी एकीकरण हुन्छ अन्यथा हुनेवाला छैन अरे । अब नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल प्रधानमन्त्री हुने र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष बनाउने लाइन चलिरहेको छ अरे । दुवै अध्यक्षलाई विस्तारै जिम्मेवारीबाट विदा गर्दै जाने योजना बनाइँदैछ अरे । यसकुरामा माओवादीका धेरै नेता पनि सहमत छन अरे । राष्ट्रपतिमा माओवादीका नेता बादललाई अघि सारिएको रहेछ । तर केपी ओलीले वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई नै दोहोराएर बनाउने योजनामा छन अरे । यस्तैयस्तै चर्चा परिचर्चा सुनिन्छ ।
टेलिभिजनमा उपस्थित नेताका कुरा सुन्ने हो भने पार्टीका नेताहरू, शुभचिन्तक सबै थोक बिर्सेर, पार्टीलाई मात्र मुख्य बनाएर, खट्दै आएका आम कार्यकर्ता, विश्वास एवं माया गरेर मत दिने मतदाता सबैलाई बिर्सन्छन र आफू नै सबै भन्दा श्रेष्ठ क्षमतावान् भएको नेताहरूको रूपमा उभिन्छन् । ती हिजो जिताउनेहरू प्रति आभारि धन्यवाद प्रकट गर्न बिर्सन्छन् । सुन्नेहरूलाई चित्त बुझने विचार भयो या भएन् ? मतलव राख्ने पक्षमा छैनन् । हरेक कोणबाट आफू नै श्रेष्ठ हो भन्ने देखाउन पहल प्रयत्न गर्दछन् । उनीहरूलाई त्यहाँ विचार राख्न पार्टीले पठाइराखेको हो ? वा आफैं वकालत गर्दैछन, सम्बन्धित पक्षले बुझ्ने सवाल रह्यो ।
सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा आजसम्मकै सबै भन्दा राम्रो नतिजा बामपन्थीको लागि हो भन्ने व्यहोरा साधारण जीवनयापन गर्ने नेपालीलाई पनि थाहा छ । यो नतिजाको मूल पक्ष यो मुलुकमा ‘कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक बनाउ’ भन्ने जनताको जनादेश हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी बन्नेछन् भन्ने नेपाली जनतामा विश्वास सिर्जना नगरिएको भए यो ढंगको नतिजा प्राप्त गर्न सम्भव थिएन भन्ने बुझाइ स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूको विचार रहेको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै पनि सर्त राखाराख नगरी पार्टी एकीकरण घोषणासहित चुनावमा होमिएका थिए । यो कामलाई नेपाली जनताले खुब मनपराए । बम पड्किंदै गरिरहेको थियो । वाम उमेदवारलाई जिताउन मतदाताहरू निडरतापूर्वक मतदान केन्द्र गइरहेका थिए । उनीहरू माननीय सांसद, मन्त्री, पार्टी केन्द्रीय लिडर, केही बन्नेवाला व्यक्तिहरू होइनन् । तर मुलुकमा स्थायी सरकार बन्छ । सबै नेपालीहरूको भलो हित हुन्छ । लाखौं लाख युवाहरू विदेशिनु पर्दैन, मुलुकमा नै रोजगारी सिर्जना हुनेछ भन्ने जस्ता विचारमा निर्देशित हुदै बाम उमेदवारलाई जिताउन महिनौं दिन भात न पानी बेगर बाम गठबन्धनलाई संसारकै मानिसको ध्यान आकृष्ट हुने ढंगबाट मत दिएर विजयी गराए ।
दुवै पार्टीले यही कारण जनताको विश्वास रह्यो भन्ने बुझाइ रहेको हुनुपर्दछ । जनताले पनि दुई पार्टी एक भएर बढ्छ भन्ने विश्वासले नै मत जाहेर गरेका थिए । दुर्वै पार्टीको संगठित बल भएका कारण विपक्षहरूले शक्ति लगाएर दबाउने क्षमता पनि राखेनन् । त्यस्तो सुविचार, सुअवसरका साथ परिस्थिति अगाडि बढिरहेको अवस्थामा ती विभिन्न ठाउँमा ‘अरे’ का नाममा चल्ने अनेकौं खाले विचार धारामा पानी निरन्तर आइरहे झैं गरी किन आइरहेका छन ? लाखौं लाख नेपाली जनता यसखाले विचारहरू आइरहेको पाउँदा गम्भिर बनेका छन् ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, केन्द्रीय लिडरहरू वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरूले यो मुलुकमा यो स्थिति ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आइरहनुभएको छ । उल्लिखित व्यक्तित्वलाई नेपाली जनताले पनि भूमिकाका आधारमा अवसर प्रदान गरेका छन् । पटक पटक सांसद, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्रीजस्ता पदहरूको अवसर प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरू जीवनभर पार्टीको केन्द्रीय नेता बनेर बसिरहनुभएको छ । उहाँहरू मात्र हैन उहाँहरूसित सम्बन्धित कुल, कुटुम्ब, ईष्टमित्र, नातागोता, सबैले विभिन्न खाले अवसर प्राप्त गरिरहेको विभिन्न तथ्यांकले बताइरहेको छ । लगभग ३५–३६ को उमेरदेखि नै ती अवसर उहाँहरूले उपभोग गर्दै आइरहनुभएको छ । हालमा उहाँहरू लगभग ६४–६५ को हाराहारीमा जीवनयापन गर्दै आइरहनुभएको छ । तर यही पार्टीको उहाँहरूकै वर्तमान उमेरका लाखौं लाख कार्यकर्ता सांसद, मन्त्री आदि अवसरहरु प्राप्त नगरे तापनि आफ्ना घर व्यवहार सबै छाडेर पार्टीको काममा निरन्तर खट्दै आइरहेका छन् । केही नपाउँदा पनि पार्टी बलियो होस् भनेर लुरुलुरु खटिरहेका छन् । उनीहरूको घर व्यवहार चौपट्ट भएको छ । प्रायः घर व्यवहार ऋणात्मक छ । हामीले गर्नेसम्म गर्यौं । यसरी तल रहेका हामी जस्तै नेता तथा कार्यकर्तालाई अवसर मिलोस् हामीले अब धेरै खोज्ने भन्दा पनि पर बसेर भएपनि पार्टी विस्तारमा लाग्छौं भन्ने विचार पार्टी केन्द्रीय लिडरलाई आउँदा पार्टीलाई हानी नोक्सानी गर्छ र ? धेरै कार्यकर्ताले माथिको वर्तमान हर्कत देखेर यस्तै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
सबै खाले परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउँदै लाने नेता नै नेता हो । आफ्नो व्यवस्थापन गर्दै तलका नेताको पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने नेता असल संगठकका रूपमा सबैले बुझ्नेछन् । विगतमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनिनु हुने नेताहरू मध्ये एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले थोरै समयभित्र जटिल परिस्थितिका वाबजुद पनि मुलुक र नेपाली जनताका लागि पनि धेरै राम्रा काम गरे । फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउन सकौं । बहुमतको सरकारको नेतृत्व दिऔं जस्ता मनस्थिति, निर्वाचन ताका सबै मतदातामा घर गरेको थियो । सम्पन्न निर्वाचनमा बामगठबन्धनले यति धेरै मत केपी ओलीकै नाममा आएको हो भनेर मेची महाकालीका मतदाता भनिरहेका छन् । यसकारण कुनै पनि वहानामा उहाँलाई हटाएर अरु प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्नु राम्रो लक्षण हैन । सबैले उहाँलाई सहयोग पुर्याउनुपर्दछ । आम कार्यकताको भनाइ यही छ । हो, उहाँले पनि बाँकी बक्यौता सवालमा दोहोर्याउने खेल, चित पनि पोट पनि मेरो भन्ने जस्ता सवाललाई छाडेर पाँच वर्ष दायाँ वायाँ नहेरी ढुक्कका साथ मुलुकको विकास गर्ने नेतृत्व गर्नुपर्दछ । यसो भएमा आउने दिनले उहाँको भूमिकालाई प्राथमिकताका साथ नेपाली जनताले सम्झिरहनेछन् । कहीँकतै उदाहरण दिँदा नेता त केपी शर्मा ओली जस्तो पो हुनुपर्दछ भन्ने उदाहरण राजनीतिक वृत्तमा चल्नेछ । अनुभवी विचारकहरूको बुझाइ यस्तै छ ।
सबै नेताहरुको इतिहास महान् छ । उहाँहरूको विगतको कामको आधारमा नै उहाँहरू नेपाली जनताका बीच स्थापित हुनु भएको हो । अब विस्तारै आउने पिढीलाई पनि महान बनाउने भूमिका अग्रज नेताको जिम्मेवारी हो । यसकारण पार्टी एकीकरण नेताहरूको भूमिकालाई मिलाउनका लागि गर्ने हैन । समयले जसजसलाई जेजे जिम्मेवारी दिन्छ । त्यही जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हो भन्ने महसुसका साथ देश र जनताको काममा लाग्ने गरी पार्टी एकीकरणलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । नेपाली जनता नेपाल राष्ट्रको भलोलाई शिरमा राखेर पार्टी एकीकरणको कामलाई अगाडि बढाइएमा आदरणीय नेता प्रचण्डसहित सबै नेताको भूमिकालाई समयले पक्कै पनि अन्यथा गर्ने छैन । समयको माग यही हो । अनेकौं कोणबाट व्याख्या गर्दै आफ्नो भूमिकालाई प्राथमिकता दिएर व्याख्या गर्न सबै नेताहरूले छोड्नु राम्रो हो । यसो गर्दै बसिएमा आफ्नो त भूमिका सकिन्छ सकिन्छ पिछाडिका पिढीहरूको भूमिकालाई पनि नेपाली जनताद्वारा अविश्वासीलो बनिने स्थिति आउन सक्दछ । राजनीतिक भविष्यवेत्ताहरूको यही ढंगको विश्लेषण रहेको छ । सबैले आफ्नाआफ्ना ठाउँबाट ग्रहण गरौं ।